Toogasho Dad American Ah lagu dilay oo Ka Dhacay Gobolka Colorado.
Thursday November 02, 2017 - 11:11:06 in Wararka by Super Admin
Weerar khasaara dhimasho iyo dhaawac ah dhaliyay ayaa markale ka dhacay gudaha wadanka Mareykanka oo kamid ah wadamada ugu badan caalamka ee ay ka dhacaan toogashooyinka maxalliga ah.
ugu yaraan sedax qof ayaa dhimatay laba kalane dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ruux hubeysan uu toogasho ka geystay mid kamida dukaamada ugu caansan gobolka Colorado.
Goob joogayaal ayaa sheegay in Nin ku hubeysan qori Otomaatik u dhaca uu rasaas huwiyay dad ka tukaameysanayay dukaanka caanka ah ee Welmarti lagu magacaabo.
Taliyaha booliska gobolka Colorado ayaa warbaahinta u sheegay in ay arkeen rasaas ku dhacaysa tukaanka kadibna ay boolisku ka jawaabeen taas oo keentay in ruuxii toogashada geysanayay uu goobta ka cararo.
Gaadiidka ambalaasta ayaa dhaawacyada Laba qof kasoo qaaday goobta waxaana kamid aheyd qof haweenay ah, waa weerarkii 2-aad oo 24 saac gudahood ka dhaca wadanka Mareykanka shalay ayay aheyd markii 8 qof ay ku dhinteen weerar gaari jiirsiin ah oo ruux muslim ah uu ka fuliyay magaalada New York.
Isbuucyo ka hor waxaa dhacay weerarkii Las Vegas oo lagu dilay 58 qof American ah weerarkaas oo saraakiisha ammaanka ku calaamadeeyeen in uu ahaa weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa ee toogasho ka dhasha taariikhda inta la ogyahay dalka Mareykanka.
Daraasad cusub oo maalmo ka hor soo baxday ayaa sheegaysa in sanad walba gudaha Mareykanka ay ka dhacaan ugu yaraan 33 kun oo toogashooyin ah.